सम्झना घिमिरे काठमाडाैं, ४ माघ
स्वदेशमै बसेर सानो पुँजीबाट पनि ठूलो उद्योगी बन्न सफल हुन सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् पाटन सिन्याका रवि श्रेष्ठ सिन्या । रवि नेपालकै टप निर्यातकर्ताको सूचीमा अग्रस्थानमा छन् ।
एभेरष्ट फेसनका सञ्चालक रवि ९ वर्षदेखि लगातार टप निर्यातकर्ताका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएका छन् । २० वटाभन्दा धेरै देशमा स्वदेशी उत्पादनहरू निर्यात गर्दै आएको एभरेष्ट फेसनले ९ सयभन्दा बढी महिला तथा गृहिणीहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।
रवि श्रेष्ठ सिन्या सामान्य परिवारका काहिँला छोरा हुन् । ५ दाजुभाइ र दिदीबहिनीसहितको श्रेष्ठको परिवारमा बिहान–बेलुकी छाक टार्नै धौधौ हुने अवस्था थियो । बाबुको गोरखापत्रको जागिर र आमाको घरमै बसेर कागजको थैलो बुनेको पैसामा बिहान–बेलुुकाको छाक टार्दै थिए ।
सानैदेखि पेट पाल्नका लागि मा अर्थात् आमालाई काममा सहयोग गर्ने रवि ६ कक्षा पुगिसक्दा आफैँ पसल गर्नुपर्छ र गर्न सक्छु भन्ने सम्म बने ।
पहिलो कमाइ १ सय ५० रुपैयाँ
५ कक्षा पढ्दादेखि घरको आर्थिक समस्याले गाँज्न थालेको थियो रविलाई । उनलाई पैसा अभाव अनुभव भयो । आफूसँगैका अन्य बालबालिका आमाको हातको गाँस नछुटिसकेको अवस्थामा उनी भने अरूकै किराना पसलमा मासिक १ सय ५० रुपैयाँमा काम गर्न थालिसकेका थिए ।
उनै रवि अहिले आलिसान फ्याक्ट्रीको प्रबन्धक कक्षमा गर्वका साथ आफ्ना विगतका कहानी सुनाइरहेका छन् ।
रवि १ वर्षसम्म बिहान सरकारी विद्यालय प्रभात माध्यमिक विद्यालय तथा दिउँसो रोजीरोटी र पैसाका लागि अरूकै पसल धाइरहे । कुरा गरिरहँदा हौसिँदै भने, ‘अरू मोवाइलमा गेम खेलिरहँदा म पसलमा १ सय ५० रुपैयाँका लागि काम गर्न जान्थेँ । तर, पनि बाल मनस्थितिमा पनि म खुसी थिएँ, जुन खुसी मैले अनुभव गरेँ, त्यति नै खुसी म अहिले पनि महसुस गर्छु ।’
उनी नोस्टाल्जिक बन्छन् ।
यसरी आलोकाँचो उमेरमै पाएको रविको अनुभवले सुरु हुन्छ एभरेष्ट फेसनको व्यवसाय ।
उनी कामका लागि अरूको पसल धाइरहँदा उनका दाजु जो उनीभन्दा मात्र ५ वर्ष जेठा छन् । उनी पनि कार्पेट कारखानामा काम गरिरहेका थिए– पेट पाल्नका लागि, परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि ।
यसरी दाजु र दिदीको अनुभव अनि रविको साथले २०५१ सालमा एभरेष्ट फेसनको सूरुवात हुन्छ । सञ्चालक रविका दाजु महेश्वर श्रेष्ठ हुन्, जसले किशोरावस्थामा नै व्यवसायको सुरुवात गरे । दाजुले सुरुवात गरेको व्यवसाय विस्तार भने रविले गरे । रवि नै अहिले यसको सञ्चालक छन् ।
सामान बेच्न जाँदा व्यापारीको गाली
पढाइमा पटक्कै मन नजाने रवि सानैदेखि व्यवसायमा आकर्षित हुँदै गए । यसरी किताब बोकेर विद्यालय जाने खेल्ने कुद्ने उमेरमा उनी व्यवसाय गर्न थालिसकेका थिए ।
आलोकाँचो उमेरमा थालेको व्यवसायले रविलाई आज मुलुककै टप निर्यातकर्ताको छवि बनाउला भन्ने पटम्कै लागेको थिएन । उनी सम्झन्छन्, व्यवसायका सुरुवाती दिनहरू ।
‘सुरुमा दाजु र छिमेकी दिदी कारखानामा बसेर काम गर्ने अनि मचाहिँ ठमेलका पसल पसल पुगेर समान किनिदिन आग्रह गर्ने गर्थें’, यति भनिरहँदा उनी गम्भीर देखिए र थप भन्न थाले, ‘कति पटक त मलाई सामान किनिदिनु भन्दा हप्काएर पनि पठाउने गर्थे । पछि विस्तारै माग बढ्न थाल्यो र हामीले त्यहीँ ठमेलमै सानो पसल खोल्यौँ ।’
हो, त्यहीँबाट उनको उन्नतिको सुरुवात हुन्छ ।
पहिलो विदेश व्यापारले दाजुको विवाह
सामान्य परिवारका रविले हौसिँदै आफ्नो पहिलो खुसी साट्न खोजे । उनको पहिलो विदेश निर्यात जापानमा थियो । उनी भन्छन्, ‘जापानमा १ लाख ६० हजारको सामान माग भयो । म त खुसीले नाचेँ नै । हाम्रा लागि धेरै ठूलो थियो त्यो पैसा ।’
एडभान्स स्वरूप ८० हजार रुपैयाँ उनको हातमा प र्‍यो । ‘त्यही पैसाले दाजुको बिहेसमेत ग र्‍यौँ’, उनी भन्छन् ।
घरमै बसेर करिब ५ सय जना महिलाले काम गरिरहेका छन् । गृहिणीहरूका लागि पनि आम्दानीको राम्रो बाटो बनाएका छन् श्रेष्ठ दाजुभाइले ।
यसरी निरन्तरको प्रयासले विगत ९ वर्षदेखि ऐभरेष्ट फेसनवेयर नेपालकै टप निर्यातकर्ता रहँदै आएको छ ।
‘अझै पछुतो लाग्छ’
मीनभवनमा उच्चशिक्षाका लागि पुगेका रविले पढाइमा मन लगाउन भने खासै सकेनन् । वार्षिक ८ सय ५० रुपैयाँ तिरेका उनले आईकम सकेपछि भने पढाइ छाडे ।
‘त्यो नै मेरो जीवनको पहिलो गल्ती थियो’, उनी सोचमग्न हुँदै भन्छन्, ‘नपढेर धेरै दुःख पाएँ, पढेको भए योभन्दा राम्रो व्यवसाय हुन सक्थ्यो होला । नपढेकामा धेरै नै पछुतो लागको छ ।’
कम्पनीका मालिक र कामदारबीचको सम्बन्ध नेपालमा अझै सुमधुर बन्न सकेको छैन । अझै पनि रोजगारदाताहरूमा कर्मचारीप्रतिको सोच र हेयको दृष्टिकोण कायमै रहिरहेको अवस्थामा रविको कर्मचारीसँगको व्यवहार हेर्दा कर्मचारी र कम्पनीका मालिकबीचको सौहार्दतापूर्ण सम्बन्धको प्रशंसा गर्न मन लाग्छ ।
उनको क्याविनको तल्लो तल्लाको भर्‍याङ नजिकै लस्करै अवार्डहरू सजाइएका छन् । ४३ वर्षकै उमेरमा निकै अवार्ड बटुल्न सफल रवि आफ्नो पहिलो अवार्डको पहिलो खुसी सुनाउँछन् ।
‘पहिला अवार्ड स्वरूप नेपालकै टप निर्यातकर्ता आईसीपी अवार्ड सन् २००९ मा जित्न सफल भएँ’, उनी सुनाउँछन्, ‘मैले जब स्टेजमा पुगेर सरकारबाट अवार्ड थापेँ, आफैँलाई थप जिम्मेवार महसुुुस गरेँ । एभरेष्ट परिवारका सदस्यहरूको अनुहार पालैपालै सम्झनामा नाच्यो अनि खुसीले अह्लादित हुँदै आफैँमा प्रण गरेँ– यो अवार्ड मात्र होइन, निर्यात बढाउने थप दायित्व हो मेरो र म त्यसका लागि प्रयास गर्नेछु ।’
यही प्रणलाई पूरा गर्न रातदिन खटेका रविले त्यसपश्चातका दिनहरूमा निरन्तर सबैभन्दा धेरै निर्याकर्ताको अवार्ड हात पार्न सफल भए । एभरेष्ट फेसनवेयरले टप एक्सपोर्टर अफ दि इयर, २०१६/०१७, नेसनल प्रोडक्टिभिटी अवार्ड, २०१७, दि बेष्ट इन्टरप्रेनर अफ दि इयर, २०१६/०१७, नाइट टफ एक्सपोर्टर, २००९/२०१०, टप एक्सपोर्टर इयर, २००९/२०१०, २०१०/२०११, २०११/२०१२, २०१२/२०१३, २०१३/१४ लगायत थुप्रै अवार्डहरू जित्न सफल भएको छ ।
भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले ६९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी उत्पादन निर्यात गरेर राज्यलाई सहयोग पु र्‍याएवापत सीआईपी आवार्डले उनको कम्पनीलाई सम्मानित गरेको छ ।
‘स्वदेशमै सुन फलाउन सकिन्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ’
व्यवसायकै लागि १ वर्ष अमेरिका बसेका रवि आफूलाई देशको मायाले नै स्वदेश तानेको बताउँछन् । नेपालमा युवाहरू व्यवसायको वातावरण नभएको भन्दै विदेशिन्छन्, त्यो गलत भएको उनको भनाइ छ ।
उनी हौसिँदै भन्छन्, ‘युवाहरूमा स्वदेशमै दुःख गरौँ भन्ने भाव नै कम छ । हामी विदेशमा १४ घन्टा लगातार काम गर्न सक्छौँ र त्यसमा गर्व गर्न सक्छौँ भने आफ्नै देशमा ८ घन्टाको काम गर्न पनि किन सकस ?’
८ घन्टा काम गर्दा पनि ठग्ने नेपाली प्रवृत्तिले नै मुलुक आगाडि बढ्न नसकेको उनको तर्क छ ।
उनी भन्छन्, ‘पैसा थोरै छ ? ठूलो व्यवसाय किन गर्नुप र्‍यो ? पुँजीअनुसारकै बरु ठेलामा राखेर मम बेच्नुहोस् न, तनमन लागाएर काम गर्नुभयो भने त्यही ठेलाको ममले तपाईंलाई उद्योगी बनाउँछ ।’
निरन्तरको प्रयासले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीको उद्योग सञ्चालन गरिरहेका रवि र उनको परिवारको सहकार्यमा ललितपुरमा नै क्यान्सर अस्पतालसमेत सञ्चालनमा रहेको छ । अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा सञ्चालित क्यान्सर अस्पताल नेपालकै पहिलो भएको उनको दाबी छ ।
यो अस्पतालमा श्रेष्ठ परिवारको लागानीलाई उनी नाफा नभएर सेवाको संज्ञा दिन्छन् । भविष्यमा अस्पताललाई अझै विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ उनको ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ४, २०७६, ०५:२०:००
यस्तो छ अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको अवस्था
लकडाउनका कारण बैंकहरू सुनसान, कारोबार ४१ अर्बले घट्यो
साउदी सरकारले दियो नीजि क्षेत्रका श्रमिकको तलव कटौती गर्ने अधिकार, नेपाली श्रमिक मर्कामा
विज्ञ भन्छन्, ‘कोरोना भाइरस कहिल्यै पूर्ण निको हुँदैन’
५१ महिनापछि महाप्रसाद राष्ट्र बैंकमा, यस्तो छ पहिलो निर्णय
'गुजारा गर्न मुस्किल परेकालाई सहयोग गरेर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना दिवस मनाऊ'
काठमाडौं प्रशासनबाट जारी पास लकडाउन अवधिभर मान्य हुने